गम्भीर रोगसंग लड्दै आएका अभिनेता इरफान खान आई.सी.यू.मा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/गम्भीर रोगसंग लड्दै आएका अभिनेता इरफान खान आई.सी.यू.मा !!
एजेन्सी,मुम्बई । बलिउड अभिनेता इरफान खानलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि मुम्बई स्थित कोकि`लाबेन अस्पतालको आई`सीयूमा भर्ना भएका छन् । उनलाई के भएको हो भन्ने भने नखुला`इए पनि स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिईएको । तर इरफानका परिवारले भने आधिकारिक रुपमा केही जानकारी दिएका छैनन् ।
तर इर`फानका एक प्रवक्ताले भने उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको पु`ष्टि गरेका छन् । उनले भने, ‘हो, इरफान खानलाई मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उहाँलाई कोलोन इन्फे`क्सन भएको छ । हामी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइरहनेछौं । अहिले उहाँ चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ । उहाँको शक्ति र साहसका कारण अहिलेसम्म यो रोगसँग लड्दै आउनु भएको छ । हामी विश्वस्त छौं कि उहाँको अपार इच्छा शक्ति र उहाँलाई माया गर्ने सबैको प्रार्थनाले चाँडै नै निको हुनुहुनेछ ।’
गत वर्ष लन्डनमा उपचार गराएर फर्केपछि इरफान मुम्बईको कोकि`लाबेन अस्पतालकै डाक्टरको निगरानीमा नियमित रुपमा स्वास्थ्य जाँच गराइरहेका छन् । ‘अंग्रेजी मिडियम’ छायांकनका बेला पनि उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताइएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही समय छायांकन पनि रोकिएको थियो ।